Isboorti iyo tababar - Krisinformation.se
TB11 Idrott So
Laga bilaabo taariikhda 14 Diseembar ayaa waxa shaqeynaaya talobixinta guud ee qaranka ee isboortiga lagu dabaqaayo. Waxay taas micnaheedu tahay in isboortiga iyo tabobarka la sameyn karo haddii ay u dhacaan qaab aanu fayrusku ku faafeynin.
Uppdaterades 11 feb 2021 13:44
Waxa hoolalka isboortiga iyo jiimamka lagu booriyay inay sii xirnaadaan
Waxay xukuumadu kamuunada iyo goboladu ku boorinaysaa inay waxqabdyada aan muhiimka aheyni sii xirnaadaan. Taasi waxay tusaale ahaan khuseysaa, lookaalada iyo jiimamka.
Waxa ka reebanaan loo sameynayaa carruurta iyo dhallinyarada dhalatay 2002 iyo wixii ka dambeeya inay ka qeybqaataan isboorti la abaabulo, waxqabadyada xilliga firaaqada iyo dhaqanka ee gudaha iyo dibaddaba labadaba.
Waxay si kastaba ha ahaatee Folkhälsomyndigheten qiimeyneysaa in goobaha tabobarada lagu qaato ee banaanku ay sii furnaan karaan, haddii ay sii wataan inay raacaan xeerarka iyo talobixinta guud ee Folkhälsomyndigheten .
Macluumaad dheeri ah ka akhri Riksidrottsförbundet iyo Folkhälsomyndigheten (bogaggu waxay ku qoran yihiin af Iswiidhish):
Talo kugu socota adigaaga isboortiga iyo jimicsiga sameynaya
Haddii aad xanuunsantihid wax nashaadaad ah ha ka qeyb qaadan.
Ka fogaw xilliyada iyo jimicsiyada la isu dha-dhawaanayo.
Dharka guriga ku soo beddelo halki aad uga beddelan lahayd meesha tababarka lagu qato.
Qof kale ha la wadaagin caagga biyaha, waxa afka lagu daboolo iyo wixii kale ee soo gudbin kara candhuuf.
Maaddo jeermis dile ah ku qallaji qalabka ay dadka badani isticmaalaan ka dib marka la isticmaalo.
Si fiican gacmaha ugu dhaq saabuun iyo biyo ama aalkolada gacmaha la marsado.
Masaafo dadka kala ugu jirso goobaha isboortiga, meelaha dabaasha, meelaha jirdhishka iyo maqsinnada kale ee tababarka.